Aerial maka Mac na-emelite na nnukwu ihuenyo ọhụrụ | esi m na mac
Tony Cortes | | Ngwa ndị ọzọ maka Mac
N'ụbọchị ọzọ nwunye m nọ na-aṅụ kọfị na kichin ka ọ na-ekiri usoro na TV. M bịarutere, ọ kwụsịtụrụ ihe ọ na-ekiri, anyị malite ịkpa nkata. Na mberede, anyị kwụsịrị ịkparịta ụka n'anya, anyị nwere mmasị n'ikiri na telivishọn ụfọdụ ọmarịcha ikuku nke ugwu ọzara. Ihe nchekwa ihuenyo amalila. Apple TV. Ruo otu nkeji, anyị chefuru ihe anyị na-ekwu.
Na ngwa efe n'elu Maka macOS, ị nwere ike ịnụ ụtọ ihuenyo Apple TV mara mma na Mac gị ugbu a ka emelitere ya ka ọ bụrụ ụdị 3.0, nke gụnyere ihe nchekwa ọhụụ Apple webatara na tvOS 15.
Aerial bụ ngwa mepere emepe maka macOS nke ị nwere ike ịnụ ụtọ ihuenyo Apple TV mara mma na Mac gị, emelitela ngwa ahụ ka ọ bụrụ ụdị 3.0, nke na-eweta ọ bụghị naanị ihe nchekwa ihuenyo Apple TV ọhụrụ. 15 tvOS, kamakwa ọhụrụ atụmatụ dị ka Apple Music mwekota na mma cache ntọala karịa nke gara aga version.
Site na Apple TV site n'ọgbọ nke anọ gaa n'ihu, ngwaọrụ ndị a nwere nchịkọta ihuenyo a na-akpọ "Aerial". Ha bụ vidiyo na-adọrọ adọrọ nke na-efegharị n'okirikiri ala mara mma na-eji nwayọ nwayọ.
Site na mmelite kachasị ọhụrụ na tvOS 15, ngwanrọ Apple TV, ụlọ ọrụ ahụ ewebatala 16 ọhụrụ ihuenyo Kedu nke dị egwu karịa? Ọfọn, ha dị ugbu a maka Mac ma ọ bụrụ na ị wụnye Aerial 3.0.
Wezụga vidiyo ọhụrụ a, mmelite nke afọ a na-ewetakwa panel nke na-egwu egwu ugbu a iji mee ka ndị ọrụ họrọ ngwa nchekwa ihuenyo ha ga-egwu. Enwekwara nhọrọ ndị ọzọ dị maka igosipụta amụma ihu igwe ma ọ bụ elekere na ọbụna njikọta na Egwuregwu Apple y Spotify.
Aerial 3.0 maka macOS bụ free, ma ị nwere ike ibudata ya na saịtị ha gọọmentị webụsaịtị. Achọrọ Mac na-agba ọsọ macOS Sierra (ụdị 10.12) ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ọ bara uru ịwụnye. A ga-ejide gị na-ekiri ihe nkiri ihuenyo dị egwu nke Apple TV.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » Aerial maka Mac na-eji ọhụụ ọhụrụ dị egwu emelitere